Xaflado Waaweyn Oo Lagu Maamuusay Lammaanihii Ugu Da’ Weynaa Ee Xaflad U Samaysta Guurkooda (109-jir Calmaday Mocooyo 90-jir Ah) - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Xaflado Waaweyn Oo Lagu Maamuusay Lammaanihii Ugu Da’ Weynaa Ee Xaflad U...
Xaflado Waaweyn Oo Lagu Maamuusay Lammaanihii Ugu Da’ Weynaa Ee Xaflad U Samaysta Guurkooda (109-jir Calmaday Mocooyo 90-jir Ah)
Inkasta oo ay muddo badan soo wada noolaayeen oo ay caruur badan isu dhaleen ubadkoodiina ubad kale sii dhaleen ayaa hadana toddobaadkan wadanka Paraguay ee qaaradda Latin America waxa ka qabsoomay xaflad Meher/Aroos oo aad u ballaadhan si weyna loogala socday shaashadaha dunida gaar ahaan kuwa Latin America. Waxa ay ahayd qisadani markii guurkooda la sharciyeeyey oo meherkoodu ka dhacay kaniisad ku taalla dalkaasi Paraguay lammaane da’doodu midkiiba tahay qarni kuwaasi oo loo aqoonsaday lammaanihii ugu da’ weynaa ee isku aroosa dalkaasi iyo guud ahaan dunida inta illaa imika la ogyahay.
Jose Manuel Riella oo da’diisu kor u dhaaftay 103 sanadood ayaa aroosay haweenay lagu magacaabo Martina Lopez oo iyana da’deedu kor u dhaaftay 99 sanadood kuwaasi oo wada noolaa jacaylkooduna soo jiitamayay ku dhawaad 80 sanadood mudadaana isku qabay meher la’aan dhinaca sharcigooda ah taasi oo keentay in ay maanta si rasmi ah isu aroosaan oo diintooda waafajiyaan guurkooda sida ay farayso. Jose Manuel iyo Martina Lopez waxa ay ku aqal galeen beer qurux badan oo ku taalla magaalada Asunción ee caasimadda wadanka Paraguay waxaana xafladdii meherkooda ka soo qayb galay dadweyne lagu qiyaasay 1000 qof oo u badan kuwo da’ ah si ay farxadda ula qaybsadaan lammaanahan dib boodhka uga jafay noloshooda ee wada noolaanshahooda waafajiyay sida ay qabto diintoodu. Jose Manuel iyo Martina Lopez waxa xafladda Meherkooda ka soo qayb galay baadariyada ugu waaweyn deegaanka ay ku nool yihiin iyada oo ay goobjoog ahaayeen siddeed ka mid ah caruurtooda waaweyn iyo ku dhawaad 50 ay sii dhaleen ubadkoodu iyo 35 kale oo ay sii dhaleen caruurta ay awawga iyo ayayda u yihiin. Labadan lamaane ayaa la sheegay in ka hor 49 sanadood ay mar samaysteen meher deegaan oo ah kan ay xukuumaddu sharciyayso balse aan wakhtigaasi kiniisadda isku mehersan taasi oo keentay in ay imika jaanis u helaan in ay guurkooda waafajiyaan sida kaniisadda ay ku xidhan yihiin qabto. Sida uu ku soo warramayo wargeyska Daily Mail oo arrinka labadan lammaane wax ka qoray, Jose Manuel oo wax laga waydiiyay mudada intaasi le’eg ee ay wada noolaayeen sababta keentay in ay maanta sharciga diintooda isku guursadaan ayaa ku jawaabay sidan: “Jacaylka aan u qabo xaaskayga ayaa igu khasbay in aan raadiyo wax kasta oo naga khaldanaa noloshayada oo xagga diintayada ah in aan dib ka saxo. Waxaan doonayaa in aan nolosha inta iiga dhiman iyana uga dhiman aan farxad iyo jacaylka aan ku soo noolayn sii laban laabno. Aadbaan u jecelahay waxaanan doonayaa in aan nolosha inta iiga hadhay ku dhammaysto farxaddeeda”. Laammanahan ayaa la filayaa in ay ku biiraan buuga lagu ururiyo dhacdooyinka layaabka leh loona aqoonsado lamaanihii ugu da’da weynaa ee xaflad meher qabsada loona dabbaal dego farxadda guurkooda. Labadan lammaane ayaa isu diyaarinaya Genius world record in lagu daro.
10 Cudur Oo Laga Qaado Hurdo Yarida
Mucjiso: Kalluun Duulaya Oo Hawada Ka Ugaadhsanaya !